Fikarohana momba ny firaisana Rose, mpivarotra voninkazo, manoritra, zavamaniry, biby, fialam-boly, trano fandraisam-bahiny, fitaovana, asa, fanambadiana ary ankizy any an-danitra: Tokony hibanjina ny fahafatesana isika - Ny fiorenan'ny vatana
Rose, mpivarotra voninkazo, manoritra, zavamaniry, biby, fialam-boly, trano fandraisam-bahiny, fitaovana, asa, fanambadiana ary ankizy any an-danitra: Tokony hojerentsika ny ho faty
Tao amin'ny Leslie Flint mivantana mivantana fandaharana momba ny feo izay natao tao 1953, mpivarotra voninkazo Londona antsoina hoe Rose no tonga. Nanontany an'i Rose i George Woods hoe ahoana ny toetrany amin'ny fanahy.
Rose dia mamaritra ny tontolon'ny fanahy ary ny fitomboan'ny zavamaniry any an-danitra
“Nangataka ahy ianao mba hanazava ny tontolontsika amin'ny fiteny ara-materialy. Tsy fantatro izay lalana hanombohana. Heveriko fa raha afaka mieritreritra ireo zavatra tsara rehetra eto amin'ny tontolonao ianao, raha tsy misy ireo zavatra tsy mahafinaritra rehetra, dia mety hanana hevitra manjavozavo ianao momba ny toa azy. Toerana voajanahary tsara tarehy, fantatrao. Voninkazo, vorona, hazo, farihy. ”
Nanontany i Woods hoe: "Mora kokoa ve ny maniry voninkazo eo noho eo eto?"
"Eny, nambolena azy ireo ianao, ary niakatra izy ireo saingy tsy manam-potoana ianao. Tsy mila rano ianao. Ny fantatro dia hoe mitombo izy ireo, karazana voajanahary. "
Nanontany i Woods hoe: "Tena mahafinaritra kokoa ve ity tontolo misy anao ity?"
"Tsarovy fa ianao irery ihany no afaka miresaka momba ny toerana manokana misy ahy. Midika izany fa toerana feno izany. Midika izany fa misy lafiny maro sy toe-piainana misy anao, fantatrao. Fa aiza eo amin'ny taniny tahaka ny any ambanivohitra anglisy tsara tarehy. Saingy azoko fa misy karazana natiora hafa, fantatrao, raha ny momba ny tavy ary izany. "
“Manana tanàna sy tanàna ve ianareo?” Nanontany an'i George Woods.
“Misy toerana hiantsoanao tanàna, izay misy olona an'arivony miara-mivory, fantatrao. Saingy tsy misy fiara fitateram-bahoaka sy fiara fitateram-bahoaka ary ireo hadalana rehetra ireo. ”
Woods: "Ahoana no ataonao?"
"Mandehana na raha tsy lavitry ny toerana lavitra ianao, dia eritrereto fotsiny ilay toerana tianao hiditra ao, sokafy ny masonao, ary tsara, amin'ny segondra vitsy dia heveriko fa mety hilaza ianao hoe any ianao."
Woods: "Mipetraka ao amin'ny trano iray ve ianao?"
"Eny ary, miaina ao anaty trano aho, saingy tsy voatery. Fa mbola tsy nahita olona tsy nanao an'izany mihitsy aho. "
Woods: "Misy karazana trano ve ato? Tahaka izao? "
“Ny karazana trano rehetra, malala. Ny sasany dia trano bongo kely kely toa hitanao tany amin'ny tanàna kely iray, ary ny sasany dia toerana lehibe lehibe onenan'ireo fianakaviana iray manontolo. Ny tiana horesahina dia ny resaka safidinao amin'ny maritrano sy ireo karazan-javatra rehetra ireo. Mazava ho azy fa tena misy ireo trano. Midika izany fa olona etsy sy eroa no manangana azy ireo. Tsy nitranga fotsiny izany, fantatrao. Ianao fotsiny dia tsy mieritreritra trano fonenana fotsiny dia azonao izany. ”
Ny olona any an-danitra dia miasa amin'ny fitiavany
Rose: “Midika izany fa eto ianao dia manana mpanao mari-trano sy mpamorona sns, ary mamorona izy ireo ary manangana. Tsy asa mafy toa anao io, fa tena fiforonany izay mandeha. ”
Woods: "Tsy mampiasa vola izy ireo, na izy, na zavatra toy izany?"
"Vola! Tsy afaka mividy na inona na inona eto ianao amin'ny vola, vady. Ny hany zavatra azonao aty dia ny toetra, ny fomba niainanao ny fiainanao, ary ny fomba fisainanao sy ny fihetsikao. "
Woods: "Ahoana no ahafahanao manamboatra ny tranonao?"
"Eny, tsy mandoa azy ianao. Manao izany izy satria tia azy. Tiany ny manamboatra trano. Toy izany koa fa tia mozika ny mozika. Faly izy mampiala voly ny namany sy ny olona, ​​ary ny olona tia mozika dia mamorona orkestra sy choir.
Natao ho an'ny fitiavana ny zava-drehetra, ary na iza na iza, ohatra, eo anilanao, izay tsy mba nanana fahafahana velively teo amin'ny fiainana, angamba te ho mpilalao mozika na mpanakanto izy ireo, afaka mandalina eto, hitanao. "
Woods: "Manao izay rehetra tiany hatao izy ireo".
"Marina izany. Ny tiako holazaina dia ny eritreritrao ireo olona an-tapitrisany izay mamakivaky ny fiainana ary mila manao asa mafonja androany, ary tsy manana fahafahana hanao zavatra izay tena tian'izy ireo atao, na oviana na oviana ny fotoana, na tsy manana ny fototra na ny vola na fanabeazana. Eto izy ireo dia afaka maka zavatra tena mahaliana azy ireo. Asa izany, nefa mahafaly azy ireo izany. "
Sakafo sy voninkazo ao amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana
Woods: "Manan-javatra ve ianao?"
”Manana voankazo sy voanjo izahay. Izahay dia manana hazo fihinam-boa sy ny zavatra rehetra ampifandraisinao amin'ny tontolonao momba ny sakafo, fa tsy mamono biby ianao ary mihinana azy eto. ”
Woods: “Inona no ataonao amin'ny voninkazoo? Ampiasain'izy ireo hanatsarana toerana ve ireo? ”
“Eny, mazava ho azy fa azonao atao izany raha tianao. Azonao atao ny manapaka ny voninkazo ary azonao ampiasaina ao an-tranonao, saingy vitsy ny olona manao izany rehefa afaka kelikely. Matetika ny olona izay tsy teto ela. Hitan'izy ireo ny voninkazo ary mieritreritra fa tsara ny manana trano vitsivitsy sns. Saingy ny dikany dia manomboka mahatsapa ianao fa tsy ilaina izany, ary mety tsy zavatra tsara izany. ”
Any an-danitra na any ivelan'ny fiainana an-tany, dia vita amin'ny alalan'ny Thinking ny Travel
“Voajanahary ny voninkazo. Manana fiainana izy ireo. Ary tsy mety izany satria afaka manana ny hakanton'ny natiora sy ny voninkazo ianao nefa tsy manapaka azy ireo ary mitondra azy ao anatiny. Ary raha mipetraka ao an-tranonao ianao ary te hahita ireo voninkazo eny ivelany, dia tsy voatery hiditra ao anatiny ianao hijery azy ireo. Azonao atao ny mieritreritra momba azy ireo fotsiny dia afaka mahita azy ireo ianao. Tsy haiko raha misy dikany aminao izany? ”
Woods: “Hivoha varavarana na varavarankely izahay.”
"Eny, tsy mila manao izany akory isika raha tsy te-hanao. Midika izany fa afaka mipetraka eo amin'ny sezako aho ary mieritreritra ny tenako fa te handeha any amin'ny boriborin 'i Flint aho, ka mieritreritra sy manakimpy ny masoko aho ary manaraka ny minitra manaraka, mety hiteny ianao hoe eto miaraka aminao aho. Mety miteraka kely fotsiny, somary hafahafa, saingy tsy afaka manampy izany aho. Marina izany. Tsy misy dikany ny fotoana sy ny habaka. "
Fanambadiana sy ankizy any an-danitra
Woods: “Manambady ve ny olona any?”
“Raha tena mifankatia ny olona roa ary mifanentana izy ireo, ary mifaly ara-dalàna miaraka amin'izy ireo dia tsy ilaina ny lalàna noforonina, na lanonana, hanaovana azy ireo ho mpivady. Tsy manana lalàna momba ny fanambadiana eto izahay ”
Woods: "Misy ankizy ve ao?"
"Eny, misy ankizy eto, saingy tsy misy zaza teraka avy amin'ny fanambadiana, teraka eto. Tsy zavatra ara-batana tsy mitovy amin'ny hoe takatrareo izany. "
(Fanamarihan'i Walter Semkiw: Ao amin'ny fivoriana Flint hafa dia hazavaina fa rehefa maty ny ankizy eto an-tany dia manohy ny maha-zanaka azy any ankoatra any an-danitra sy any an-danitra izy ireo, ka lasa olon-dehibe. Alfred Higgins.)
Biby any an-danitra
Woods: "Mahasalama ve ny biby any?"
“Oh, ry ry malala, ry lanitra tsara ô. Manantena aho fa rehefa tonga eto ianao dia mety hieritreritra, oh malala, tsy tiako ny liona ho tonga eo am-baravarako, fa tsy hieritreritra an'izany ianao. Ny biby dia tsy mandehandeha toy ny saka biby fiompinao. ”
Woods: "Tsy mifamono ny biby, sa tsy izany?"
"Tsia, zava-dehibe fotsiny izany, faniriana sakafo ary hanoanana. Ny faniriana ara-nofo ao amin'io fanajana io dia mamely azy ireo mba hifamono, saingy tsy misy izany eto, satria very ny faniriana hanina. Misy ireo olona tonga eto, amin'ny voalohany, mahatsiaro faniriana hanana sakafo sasany. Eny, afaka mahazo izany izy ireo. Saingy tsy ela izy ireo dia miala amin'ny fahazarana maniry izany, ary rehefa afaka fotoana fohy, dia karazana lozotra lavitra azy ireo no mety holazainao. "
Matory ao amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana
Woods: "Matory ve ianao?"
“Eny, afaka matory ianao raha tena mirona, saingy tsy ilaina izany. Raha reraka ara-tsaina ianao dia miala sasatra ara-tsaina fotsiny, manakimpy ny masonao dia miala sasatra ianao ary mamoha ny masonao rehefa afaka kelikely. Tsy mahatsiaro reraka intsony ianao. ”
Woods: "Mandany fotoana ve ianao?"
"Eny ary, tsy fantatro. Tsy misy famerana ny fotoana ahazoako izany. Tsy mahatsiaro ny fotoana isika. Fantatro fa tsy azonao an-tsaina, midika izany fa mieritreritra ianao hoe tsara, tolakandro, hariva ary alina. Ireo zavatra ireo dia tsy misy fiantraikany amintsika. Tsy manam-potoana tahaka izao anananareo izahay. "
Woods: "Manana alina ve ianao androany?"
"Tsia, fa raha manakimpy ny masonao ianao dia miditra amin'ny toe-javatra izay azonao antsoina hoe karazana takariva iny."
Planeta, tavoahangy ary lanitra any an-danitra
Woods: "Rose, efa nitsidika planeta hafa ve ianao?"
"Tonga tany amin'ny faritra sasany ambany aho, malala, saingy tsy tany amin'ny planeta aho raha azonao izany. Izany ve no tianao holazaina? "
Woods: "Efa tany Mars sy Venus ve ianao?"
"Tsia, tsy nisy tamin'izy ireo, ry malalako. Tsy fantatro na inona na inona momba an'i Mars sy Venus, ary ny sisa rehetra. Mety ho fantatry ny sasany amin'ireo olona fantatry ny siansa izany. Tsy izany. "
Woods: "Misy ve ny lalàna toy izany?"
"Misy ny lalàna voa-Janahary, izay tiako rehetra vao haingana, rehefa tonga izahay. Tsy misy lalàna sy fitsipika ary fitsipika toy ny governemanta sy ny sisa, saingy misy lalàna iraisana, izay ekentsika rehetra. "
Woods: "Misy rahona ve?"
“Misy rahona eny amin'ny lanitra indraindray, vokatra mahafinaritra any an-danitra, mahatalanjona kokoa noho ny zavatra nofinofisinao rehetra, ary tsy voatery ho manga izany. Tsia, indraindray ny lanitra dia mety ho maitso sy mena, na ny loko marevaka rehetra. Ny sasany amin'ireo loko tsy mbola hitako teto ambonin'ny tany. Tsy voafetra toa anao izahay, hitanareo. ”
Apparel amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana
Woods: "Rose, manao akanjo ve ianao?"
“Mazava ho azy fa manao akanjo isika, malala. Ny olona dia mitafy ny tenany amin'ny karazana zavatra ahalalany fahafinaretana. Mazava ho azy, eo am-piandohan'ny fahatongavany eto, rehefa misy vehivavy mandalo amin'ny zato taona iray, dia mieritreritra izy ireo fa tena ilain'izy ireo izany karazana akanjo izany ary ho an'ny fotoana itondran'izy ireo azy. Nefa rehefa mandeha ny fotoana dia tsapan'izy ireo fa tsy zava-dehibe izany. Nanova tsikelikely ny fomba fijeriny izy ireo ary nanova ny akanjony. ”
Woods: "Eny ary, amin'izao fotoana izao, Rose, inona no nataonao?"
“Manana akanjo fotsy tsara tarehy aho, hatrany ambony ka hatrany amin'ny rantsantongony. Manana sisin-tany manodidina izy, manana tanany lava, lava tanany, ary misy fehikibo manodidina ahy, volamena. ”
Woods: "Inona ilay fitaovana?"
"Tahaka ny karazana sehatra. Ary tsy vetivety ny voloko, toy ny efa ela, ela loatra. "
Rivotra, farihy sy sambon-danitra
Woods: "Mila manasa ny akanjonao ve ianao?"
"Tsia, fa afaka milomano ianao. Afaka miditra ao anaty rano ianao raha tianao, saingy tsy maloto ianao. Tsy misy vovoka, vovoka na zavatra toy izany eto. "
Woods: "Manana ny ranomasina tahaka ny eto ve ianao?"
"Eny, tsy nahita ranomasina aho, fa misy renirano sy farihy tsara tarehy."
Woods: "Manana sambo ho azy ireo ve ianao?"
"Oh, tsara lanitra, eny. Birao tsara tarehy. Tsy midika izany fa tena tsara be ny boatin-doko, fa tena sambokely tena tsara, tahaka ny any Venice. "
Woods: "karazana gondole?"
"Eny, tena tsara tarehy, nalaina tamin'ny voninkazo. Indraindray isika manana gala na fankalazana ao anaty rano ary ny rehetra dia manazava, fa tsy amin'ny herinaratra na ny entona, fa manazava ny sain'ny olona. Izany no hany azoko ambara. "
Tanàna sy fialam-boly ao amin'ny Tontolon'ny Fanahy
Woods: "Manana tanàna ve ianao?"
'Misy tanàna tsara tarehy, nefa tsy mitovy amin'ny tanànanao izy ireo, maloto sy malemy ary ny sisa rehetra. Ny sasany amin'ireo tanàna dia tena mahafinaritra. Ary manana lalao any amin'ny teatra sy toerana miaraka amin'ny mozika isika, fa amin'ny amina didy avo kokoa. Ny zava-drehetra dia manana tanjona. Tsy misy mahasosotra azy io.
Nefa mihomehy isika. Manana zavatra mahagaga izay fantatrao koa izahay. Na izany na izany, dia tsy mahatsiaro vazivazy intsony isika satria eto. "
Woods: "Misy sekoly fianarana ve?"
“Oh, sekoly lehibe, tranombakoka, toerana ahafahanao mandeha ary mamaky ny tantaran'ny firenena sy ny olona rehetra. Misy karazana toerana mahatalanjona rehetra any. Tsy misy very, fantatrao. ”
Ny resaka sy ny telepaha ao amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana
Woods: "miresaka ve ianao?"
"Tsy ilaina izany, fa ny olona dia miresaka. Saingy rehefa tonga teto nandritra ny taona vitsivitsy ianao tany an-tany dia tsapanao fa tsy ilaina ny miresaka. Azonao atao ny mandefa hevitra izay noraisina. Izany dia karazana telepatie. "
Navoakan'i Rose tao amin'ny fivorian'ny media Flint tao 1953. Niverina folo taona izy tamin'ny Septambra 9, 1963. Nanaiky ny feon'i Rose i Betty Greene.
Rose: "Tonga isan-kerinandro ny karazan'olona rehetra. Toa manintona olona marobe foana ianao. Isaky ny mivezivezy ianao dia misy olona maro foana. Tsy nanana fahafahana aho hitia na aiza na aiza, fantatrao. Tsy hadinoko ianao. "
Fiainana any an-danitra
Nanontany i Woods hoe: "Fa inona izao ataonao izao?"
“Mandany kely amin'ny fotoanako miaraka amin'ireo tanora aho. Tena tiako ny ankizy. Somary manao kely amin'izy ireo aho.
Tiako ny fotoana mangina rehefa mipetraka aho ary manao asa kely ary dia mamaky aho. "
Woods: "Mipetraka ao amin'io trano io ve ianao, Rose?"
"Eny, ary faly aho. Tsy manana faniriana manokana hifindra aho. Mazava ho azy, ianao dia mahazo ireo olona ireo izay maniry ny hanohy hatrany hatrany. Tsy manintona ahy izany rehetra izany.
Heveriko fa ho azoko ny faniriana indray andro any. Fa nahoana aho no tokony hanao izany? Marina daholo. Manana toerana mahafinaritra ahy manokana aho, ny tombotsoako sy ny namako rehetra. "
Woods: "Manana zaridaina ve ianao?"
"Izaho sy izy dia mifanaraka amiko. Maniry ny voninkazo aho ary tsy misafidy iray. "
Woods: "Tsy izany?"
"Tsia Mamela azy ireo hijanona ao amin'ny faritra manodidina azy ireo aho ary hahazo ny fahasambarana sy fifaliana lehibe hikaroka sy hijery azy ireo. Tsy ho faty mihitsy izy ireo. Manana fiainana feno sy fiainana izy ireo. "
Woods: "Toy inona ny tranonao?"
“'Manana efitrano efatra izy io, ampy ho ahy hikarakarako azy. Mampihomehy, tsy mahazo loto ianao. Lazain'ny olona amiko fa vovoka na vovoka ihany no azonao eo amin'ny toeranao raha diso ny sainao! Tena afa-po aho avelao ny zava-drehetra hitombo sy hanao izay tiany. Tonga ao anaty zaridaina ny vorona. Milamina toy ny volony ihany izy ireo. ”
Ny fiainana ara-tsosialy any an-danitra
Woods: "Mankany amin'ny toerana maro ve ianao, Rose?"
"Oh, indraindray mba hijery ny namako.
Tonga ny olona ary miresaka amiko indraindray ny toerana sy ny sehatra samihafa rehefa miantso azy ireo. Mahatsiaro tena tsara daholo izy rehetra, nefa tsy mahatsiaro ho voavolavola. Sambatra aho izay misy ahy. "
Woods: "Misy manodidina ve ny manodidina?"
"Misy olona mipetraka sy manodidina, izay tena manahirana ahy. Angamba izany no antony mahatonga azy ireo ary miaraka amin'izy ireo aho. Miara-mivory isika indraindray.
Faly be aho miala sasatra ary hangina. Nianatra namaky aho, zavatra tsy vitako firy tamin'izaho teo anilanao. Mahazo boky aho. Misy olona mitondra boky ho ahy. Mipetraka izahay ary miresaka ary mamaky. Indraindray mankany amin'ny sary izahay. ”
Woods: "Azonao ambara ny sasany amin'ireo sary ireo?"
“Afaka mahita ireo zavatra hitanao teo anilanao, sary tianao indrindra ianao. Nefa maro amin'izy ireo no manana fari-pitondran-tena, tena mahaliana sy mahasoa. ”
Toetrandro, zaridaina, voninkazo ary vono mavo ao amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana
Woods: “Misy saha sy zavatra ve any? Tsara tarehy ve izy ireo? ”
“Eny, tsara tarehy. Ahitra maintso tena tsara no ananantsika ary fantatro fa hahagaga anao izany raha milaza aminao aho fa manana tanim-katsaka. Saingy ny zavatra mampihomehy dia tsy manana fizaran-taona isika. Ohatra, mbola tsy nahita orana aho. Tsy fantatro koa fa mafana izy io. Mahafinaritra be foana. Suasana mafana tsara sy mahafinaritra. Ary mbola tsy nahita ny Masoandro mihitsy aho. Ka heveriko fa tsy ny masoandro no hanazavana antsika sy ny hazavantsika satria mbola tsy nahita an'io aho. ”
Woods: “Toy ny antsika ve ny ahitra sa ny volony manify kokoa?”
“Eny, lohataona eo ambanin'ny tongotra izy io ary tena tsara. Maitso tsara tarehy. Ary efa nandeha tany amin'ny toerana avo be toy izany ny voninkazo, ka tokony heveriko fa fito na 8 metatra ny haavony. Toy ny mandeha mamaky ny ala misy azy ireo izany. Ary tsara ny hazo, ary tsara ny voninkazo amin'ny sasany amin'izy ireo. Ary ny ranomanitra! Mahagaga ny fofona. ”
Woods: "Tena marina? Rose, inona no ataon'izy ireo amin'ny katsaka? Moa nopotehin'izy ireo ve izany, na nanao na inona na inona niaraka taminy? "
"Eny ary, tsy fantatro. Tsy mbola hitako mihitsy hoe tapaka izany, nefa toa misy foana izany. "
Woods: "Tsy nahita ny mofo vita tamin'io?"
“Tsia, ary zavatra iray hafa izany. Tsy tsapako ny faniriana hihinana. Nanao izany aho tamin'ny vao tonga teto, saingy voankazo sy karazan-javatra toy izany ny ankamaroany. Heveriko fa very ny fanirianao zavatra iray, tsapanao fa tsy dia zava-dehibe loatra izy, ary avy eo dia tsy misy intsony ho anao.
Fa iray monja amin'ny dite kafe aho, ary tiako izany ary mbola manana izany. "
Woods: "Ahoana no ahazoanao ny diteo?"
Eny, zavatra mampihomehy izany, fantatrao. Tsy miditra an-dakozia aho ary mametraka ny kitay ary manao kapoaka dite ho amin'izany. Saingy raha mahatsapa aho fa ilaina ny fisotroana dite iray, dia izao no azoko lazaina eto. "
Mozika sy fialam-boly any an-danitra
Woods: "Manana mozika ve ianao any?"
'Eny eny, efa nandefa kaonseritra sy zavatra marobe aho. Mozika mahafinaritra. Tsy highbrow, fa mahafinaritra, fantatrao. Tsy jazzy muck fa zavatra mahafinaritra. Aza maheno mozika ara-pivavahana firy. ”
Betty Greene: “Nilaza ianao fa nanao fanjaitra. Manao akanjo ve ianao? ”
"Eny. Betsaka ny zavatra nataoko ary misy olona mitondra fitaovana ho ahy. Tompokolahy tena tsara efa nifanena teto, oh, lehilahy tena tsara izy. Somary ambony toerana izy, nefa mitsidika izy, mitsidika ny namako sasany koa. Ary tsy tonga foana izy. Oh, malala-tanana tokoa izy. Vao tsy ela akory izay dia nitondra zavatra tsara tarehy ho ahy izy, aloky ny manga mahafinaritra, ny loko tiako ihany. Nilaza tamiko izy fa hanao fitafiana mahafinaritra ilay fitaovana. ”
Ny biby any ankoatra dia afaka mifampiresaka
Woods: “Rehefa mivoaka any ivelany ianao mba hivoaka any ambanivohitra, mahita biby ve ianao?”
“Oh, nahita biby tany an-tsaha aho, mazava ho azy fa nahita aho. Ary tsy matahotra azy ireo aho. Eto izy ireo dia malemy paika ary toy ny hoe afaka miresaka aminao izy ireo. Tsy mbola nahita zavatra toy ny moka na lalitra aho fa nahita lolo tena tsara tarehy. ”
Tsy misy na inona na inona maty, fa ny olona dia afaka miala any amin'ny sehatra avo kokoa
“Nilazana aho fa tsy ho faty mihitsy. Orinasa mampihomehy, tsy maty ianao fantatrao. Tsy misy maty. Raha vao tonga teto aho, raha vao nandamina an'io aho dia nieritreritra fa haharitra hafiriana no haharetan'ity, fantatrao. Nanontany tena aho hoe haharitra hafiriana ity? Nanontany tena aho hoe karazana fiainana hafa andehananao mandritra ny taona maro ve izany, dia lasa antitra indray, ary avy eo mandaka ny siny ianao. Nanontany tena aho raha misy zavatra hafa ankoatr'izay. Fa tsy misy maty eto. Tena mampiavaka azy io.
Fony teto ambonin'ny tany izahay dia nilaza hoe mahantra antitra toy izany ary, efa lasa izy fantatrao. Etsy ankilany, mitovy ihany izy io. Misy olona hilaza amiko fa efa nisy ny andaniny sy ny ankilany. Mazava ho azy fa midika izany fa lasa nandeha kely izy ireo. ”
Woods: "Any amin'ny faritra hafa?"
"Eny, very ny namako vitsivitsy toy izany aho. Lasa izy ireo. Nefa tsy fantatro, fa izaho no mipetraka. "
Architecture sy kintana Movie tany amin'ny Tontolon'ny Fanahy
Woods: "Inona ireo tanàna ireo?"
"Oh, tsara tarehy, tokony hilaza aho. Tsy hoe miaina amin'ny iray aho. Saingy tsara tarehy izy ireo, holazaiko izany. Zaridaina mahafinaritra sy karazana vala sy toerana ho an'ny ankizy manokana. Tena mahafinaritra. Tsy misy mahazatra. Tsy misy vidiny sy ratsy.
Ny zavatra tena tsara sy mahafinaritra rehetra, fa mampiala voly, fantatrao. Nandeha tamin'ny teatra iray na roa aho ary nahita filalaovana. Nahita olona malaza be dia be novakiako taloha aho, satria tsy nandeha tany amin'ny teatra mihitsy aho. Tsy zakako. Indraindray aho mahita ny sasany amin'ireo kintana taloha. Tena vitsy no hitako teto. Betsaka amin'izy ireo no mbola manao io karazana asa io ihany. ”
Woods: "Ahoana ny firafetana?"
“Endrey, tena tsara sy maro karazana izy, karazana rehetra. Ny vato dia toy ny perla. Zavatra iray hafa, tsy misy fifamoivoizana. Tsy mahazo fiara ianao, tsy misy moto ary tsy misy toa izany. Ny olona afa-po fotsiny amin'ny diany. Tsy misy mitaingina. Tsy ilaina izany. Tsy misy ezaka amin'ny fandehanana eto. ”
Woods: “Fa raha te-ho lavitra ianao dia mieritreritra, sa tsy izany ry Rose?”
“Tsy fantatro raha mandeha amin'ny eritreritra ianao. Tsia, heveriko fa afaka mahatsapa fahatsapana fa te-handeha amin'ny toerana iray ianao, ary hahita ny tenanao any. Tsy misy ezaka. ”
Woods: "Misy ala ve any?"
“Eny, ala mahafinaritra. Toerana mahafinaritra. ”
Tokony hibanjina ny fahafatesana isika
“Tsy mila matahotra ho faty ny olona. Izy io dia zavatra tokony hiandrasan'ny rehetra, raha tsy hoe manana zavatra mahatsiravina ao an-tsainy na amin'ny fiaviany izy ireo. Mazava ho azy, heveriko fa samy nanana taolam-paty tao anaty vilia ny olon-drehetra. Fa ny salanisan'ny olona tsy manana ahiahy amin'ny ho avy eto.
Na dia ny tena ratsy fanahy aza, raha ny henoko, na dia mampalahelo sy mety amin'ny lafiny iray aza dia ratsy be ho azy ireo, nefa tsy very izy ireo, ry sakaiza mahantra. Ampianarina sy tarihina izy ireo ary amin'ny farany hivoaka amin'ny maizina.
Ny olona antonony dia tsy nanana nanahirana. Midika izany fa tsy dia tsara loatra aho ary tsy dia tena ratsy toetra. Saingy tokony holazaiko fa nanao tsara ho an'ny tenako aho, ary izany no antony tsy te hiova. ”
Woods: “Faly be ianao any amin'ny misy anao?”
"Eny izaho dia. Ary noho izany dia tsy mahatsiaro ho voatery hiova aho. Eny, tsy maintsy mandeha aho. Na izany aza, mitadiava ny tenanareo. Ary faly aho mandre ny asa soa rehetra ataonao. "